Andoid များအတွက် Mini ကို Infinity က Hack ၏ခေါ်ဆိုမှု | iOS က
Morehacks အဖွဲ့ယနေ့အသစ်တစ်ခုကို Hack စတင်ခဲ့ပါတယ်. သင်ဟာ android သို့မဟုတ် iOS အတွက်ဂိမ်းကြိုက်လျှင် , Mini ကို Infinity ၏ခေါ်ဆိုမှုကျွန်တော်တစ်ဦး hack ကဖန်တီး. Mini ကို Infinity က Hack ၏ခေါ်ယူခြင်းဖြစ်ပါသည် 100% သိရှိနိုင် သင်အသုံးပြုနေလျှင်သင်ပြဿနာများရှိသည်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ. အဆိုပါ hack ကအော်တိုမက်တစ် update ကိုအပတ်စဉ် .Can Android, iOS ပေါ်တွင်အသုံးပြုပါလိမ့်မည်. ဒီ hack အောက်ပါအချက်များကိုရှိပါတယ် အင်္ဂါရပ်များ:
-Infinity က Crystal
Mini ကို Infinity က Hack ၏ဒေါင်းလုပ် Call ,Connect your device via USB to PC , သင်၏ platform ကိုရွေးပါထို့နောက် connect ကိုကလစ်နှိပ်ပါ , သို့ဖြစ်လျှင်သင်သည်ချင်တယ်ဘယ်လိုများစွာသောရွှေသို့မဟုတ်ပုံဆောင်ခဲကို Select လုပ်ပြီး hack ကစတင် click နှိပ်ပါ . သင်င်းဒိုးပေါ်လာပြီးစီးသည်အထိစောင့်ဆိုင်း. သင် window ကိုပြီးစီး hack ကထင်ရှားပေါ်ထွန်းခြင်းကိုရှေ့တော်၌ထို USB cable ကိုဖြုတ်လိုက်ပါလျှင်အလုပ်မလုပ်ဘဲနေမည်. This hack transfer some data to your device . ကိုပျော်ရွှင်ပါ
ဖေဖေါ်ဝါရီလ 16, 2014 တွင် 3:55 ညနေ
This hack tool give me 99999 ရွှေနှင့် 99999 Crystal
Arline H ကပြောပါတယ်:
ဖေဖေါ်ဝါရီလ 16, 2014 တွင် 3:56 ညနေ
ဖေဖေါ်ဝါရီလ 16, 2014 တွင် 3:57 ညနေ
iOS မှာအလုပ်လုပ်ကိုင်. ကျေးဇူးတင်စကားကိုအလွန်
Instagram ကို Followers Hack